‘वैंकर्स एशोसियनले चलाएको सिण्डीकेट नतोडेसम्म आर्थिक क्षेत्रको समस्या समाधान हुँदैन’ संजिव कोइराला, अध्यक्ष- नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, गण्डकी प्रदेश
संजिव कोइराला आइतवार, बैशाख २१, २०७७, १०:०८:०० मा प्रकाशित
गण्डकी प्रदेशमा लक डाउनले कस्तो प्रभाव परेको छ ?
सबै ठप्प छ । अर्थतन्त्र बेहाल अवस्थामा छ । तपाईलाई थाहा छदैंछ, गण्डकी प्रदेश भनेको पर्यटन उद्योगमा केन्द्रित अर्थतन्त्र भएको प्रदेश हो । लक डाउन शुरु हुनु अगाडि फागुन १५ देखि नै यहांको पर्यटन क्षेत्र लगभग बन्द थियो । पर्यटकहरुको आवागमन नै कम भएको थियो । होटलदेखि पार्टी प्यालेसहरुसम्म, सांस्कृतिक कार्यक्रमहरुदेखि व्यवसायिक गतिविधिसम्म, पोखरादेखि घान्द्रुक, मुस्ताङसम्म सबै गतिविधि लगभग ठप्प थियो । लक डाउन शुरु भएपछि त भन्नै परेन, सबै पूर्णरुपमा ठप्प छ । अहिले मानिसहरुको लागि कसरी गुजारा गर्ने र ज्यान जोगाउने भन्ने मात्रै ध्यान छ ।
कोरोनाले प्रदेशको अर्थतन्त्रमा कत्तिको नोक्सानी गर्यो भन्ने बारेमा कुनै तथ्याङक छ ?
त्यो हामीले भन्ने कुरा होइन, सरकारले दिने तथ्यांकलाई नै हामीलाई आधार मान्ने हो ।
जहांसम्म उद्योग व्यवसायको कुरा छ, त्यसमा निकै ठूलो नोक्सानी वेहोर्नु परेको छ । उद्योग, अब कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ । पोखराको अर्थतन्त्र पर्यटन र त्यसपछि घर जग्गा व्यवसायमा आधारित थियो । पर्यटन त यसै डुविहाल्यो, सहकारीहरुले घरजग्गामा ठूलो लगानी गरेका थिए । अब घर जग्गा व्यवसाय ठप्प भएपछि त्यसको मार सहकारी क्षेत्रमा पर्ने निश्चित छ । यसबाट सहकारीहरु कसरी निस्किन्छन् भन्ने ठूलो चुनौति सृजना भएको छ ।
अर्काे कुरा पर्यटन उद्योग भन्नाले केवल होटलहरु भन्ने मात्र हुंदैन । त्योसंगसंगै धेरै कुरा जोडिएका हुन्छन् । सबैभन्दा ठूलो कुरा खाद्यान्न उद्योगहरु, तरकारी, फलफूल, बेकरी, क्याटरिङ, आदी सबै उद्योगहरु पर्यटन उद्योगका हिस्सा हुन् । पर्यटन उद्योग ठप्प भएपछि ती सबै उद्योगहरु ठप्प हुन्छन् । अहिले त्यही भैरहेको छ ।
सवैभन्दा ठूलो कुरो त अहिले डिस्ट्रिव्युटर्सहरु समस्यामा परेका छन् । किनकी पिठो, विस्कुट, च्याउचाउ लगायतका धेरै जसो खाद्य पदार्थको उपभोग मिति ६ महिनाको हुन्छ । त्यसमाथि उद्योगवाट उनीहरुकहां पुग्दा नै एक डेढ महिनाको मिति गैसक्छ । त्यस्ता समान विक्री गर्न नसक्दा अहिले धेरै व्यवसायीहरुको विचल्ली भएको छ ।
समस्या समाधानको लागि केही पहल भएको छैन ?
केही दिन अगाडि बसेको सरकारी र नीजि क्षेत्रका सरोकारवालाहरुको संयुक्त वैठकले विश्व स्वास्थ्य संगठनले तोकेको मापदण्ड अपनाएर पोखरा औद्योगिक क्षेत्र भित्र रहेका खाद्य उद्योगहरु संचालन गर्ने निर्णय गरेको छ । खाद्य सामाग्रिको अभाव हुन नदिन त्यो एउटा उपाय हो भन्ने लागेको छ । तर, त्यसले नै समस्या समाधान त गर्दैन ।
सरकारले उद्योगि व्यवसायीलाई राहत दिन व्याज अनुदान लगायतका विभिन्न कार्यक्रमहरु ल्याएको छ, त्यसले त केही हदसम्म समस्याको समाधान गर्ला नी, होइन ?
केही पनि गर्दैन । किनकी त्यो कार्यान्वयन हुने गरि ल्याइएकै छैन । सरकारले कर्जाको चुक्ता गर्ने अवधि असारमसान्तसम्म बढाएको घोषणा गर्यो । तर, त्यो सुविधा कति व्यवसायीले पाए ? सरकार र राष्ट्र वैंकको निर्देशन अनुसार होइन, वैंकहरुले आफू खुसी मन लागेका मान्छेहरुलाई व्याज छुट दिइरहेका छन् । मन नलागेका मान्छेलाई अलिकति पनि छुट दिइरहेका छैनन् ।
नेपालमा यातायात क्षेत्र पछि सबैभन्दा ठूलो सिण्डिकेट वैंकर्स एशोसियसनले चलाइरहेको छ । यातायात क्षेत्रको सिण्डिकेटको बारेमा त सबै बोल्छन् । तर, वैंकर्स एशोसियसनले चलाएको सिण्डिकेटको बारेमा कोही बोल्दैन । उनीहरुले राष्ट्र वैंक, सरकार सबैलाई प्रभावित पारेका छन् । तपाईले हेर्नुस न सरकारले ल्याएका कतिवटा कार्यक्रमहरुलाई वैंकहरुले कसरी उडाइदिएका छन् भन्ने थाहा हुन्छ । सरकारले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा कर्जा दिने, व्याज छुट दिने लगायतका कतिवटा कार्यक्रम लागू गरेको छ ? ती मध्ये कतिवटा कार्यक्रमहरु लागू भएका छन् र त्यसबाट कति मानिसले फाइदा लिन सके भन्ने कुरा हेर्ने हो भने सबै कुरा स्पष्ट हुन्छ । सरकारले कार्यक्रम ल्याउंछ, तर वैंकर्स एशोसियसनले सिण्डिकेट लागू गरेर ती कार्यक्रमलाई असफल बनाइदिन्छ । अहिलेकै घटनाले पनि त्यही कुरा पुष्टि हुन्छ नी, होइन र ? कुन वैंकले सरकार वा राष्ट्र वैंकको निर्देशन अनुसार ऋणीहरुलाई सुविधा दिइरहेका छन् ? कसैले पनि दिएको छैन । सरकार र राष्ट्र वैंकको निर्णय एकातिर, वैकर्स एशोसियनको निर्णय एकातिर ।
वैंकर्स एशोसियसनले सिण्डिकेट चलाएको छ, भन्नु भयो, सरकार उनीहरुको प्रभावलाई तोड्न किन नसकेको होला ?
त्यसमा स्पष्टै छ, पैसा नै मुख्य कारण हो । सरकार चलाउनेहरुलाई, राष्ट्र वैंकका हाकिमहरुलाई पनि लाग्दो हो, पैसा यिनिहरुसंगै छ । भोली केही पर्यो भने सहयोग माग्नु पर्ने त यिनीहरुसंगै हो । त्यसैले सरकारले पनि वैकर्स एशोसियनको सिण्डिकेट प्रति आंखा चिम्लिरहेको छ ।
अहिलेको समस्या समाधान गर्ने हो भने वैंकर्स एशोसियसनको सिण्डिकेट तोडिनु पर्छ र सरकारले लागू गर्ने व्याज अनुदान लगायतका राहतका कार्यक्रमहरु सबै ऋणीहरुले पाउने सुनिश्चितता गरिनु पर्छ ।
अहिले समस्या परेको छ, यसबाट पार पाउनको लागि सबै पक्षले अलिकति ‘कम्प्रमाइज’ गर्नुपर्छ । उद्योगी व्यवसायीले के गर्नु पर्छ, गर्न तयार छन् । वैंकमा बचत गर्ने नागरिकले पनि पाउने व्याजमा अलिकति ‘कम्प्रमाइज’ गर्न तयार हुनु पर्यो । वैंकहरुले पनि नाफाको अनुपात अलिकति कम गर्नु पर्यो । अनि बल्ल समस्या समाधान हुन्छ ।
तपाई उद्योग वाणिज्य महासंघको प्रदेश अध्यक्ष, महासंघको नेतृत्वले पनि यी समस्या समाधानको लागि पहल गर्नु पर्ने होइन ? महासंघको केन्द्रिय नेतृत्वको भूमिका पनि त शंकास्पद छ नी, होइन ?
महासंघ, उद्योग परिसंघ, चेम्बर अफ कमर्स जस्ता संघ संस्थाले पनि माथिल्लो वर्गको हित हेर्ने गरेका छन् भन्ने कुरा सांचो हो । त्यस्तो संस्थाहरुको नेतृत्व गर्नेहरुले साना तथा मझौला व्यवसायीको समस्यालाई बुझ्ने प्रयास नै गर्दैनन्, गरेका छैनन् भन्ने कुरामा असहमती राख्नु पर्ने कारण छैन । उनीहरु जहिले पनि ठूला उद्योगि व्यवसायीको हितको रक्षाको लागि मात्र लविङ गरिरहेका हुन्छन् ।
संजिव कोइरालाबाट थप
‘वैंकर्स एशोसियनले चलाएको सिण्डीकेट नतोडेसम्म आर्थिक क्षेत्रको समस्या समाधान हुँदैन’ आइतवार, बैशाख २१, २०७७, १०:०८:००